Shirarka Loogu Yaboohay Somalia Dhaqaalaha Ee Turkiga, Talyaaniga, Yaxyaxii Wasiirka Ka Socday Somalia Iyo Booqashada La Filayo Inay Ku Tagaan Muqdisho Raysal Wasaaraha Turkiga Iyo Amiiro Carbeed | Araweelo News Network (Archive) -
Shirarka Loogu Yaboohay Somalia Dhaqaalaha Ee Turkiga, Talyaaniga, Yaxyaxii Wasiirka Ka Socday Somalia Iyo Booqashada La Filayo Inay Ku Tagaan Muqdisho Raysal Wasaaraha Turkiga Iyo Amiiro Carbeed
Istanbul(ANN) Shir ay hogaamiyayaasha xubnaha ka ah Ururka Islaamaka oo shir uga socday dalka Turkiga ayaa kulankoodaa kaga yaboohay dhaqaalle lagu taageero masiibada Somalia. Waxayna dalalka Ururka Iskaashiga Islaamka ku
bahoobay ku yabooheen 350 milyan oo dollar si loo taageero dadka dhibaataysan ee Somalia. kadib markii uu Raysal wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan halkaa ka jeediyay hadal qiiro leh oo dareenka hogaamiyaayasha shirka ka qayb galay.
Ra’iisal Wasaaraha Turkiga ayaa lagu wadaa in maanta oo Jimce ah uu booqasho ku tago xarunta Somalia ee Magaalada Muqdisho isaga oo ay wehelin doonaan Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo in ka baddan sodon xubnood oo saraakiil ka tirsan xukuumadda dalkaa ay weheliyaan, kuwaas oo booqan doona kaamamka qoxootiga Somalia ee magaalada Muqdisho.
Dawladda Turkiga ayaa dhaqaalle gaadhaya 100mly oo dollar ugu deeqday dadka dhibaataysan ee Somalia, iyadoo dawladda Turkigu door mihiim ah dhawrkii sanandood ee u danbeeyay ka qaadatay arrimaha Somalia.
Dhinaca kale Xoghayaha horumarinta caalamiga ah ee dalka Britain Andrew Mitchell ayaa maanta booqday magaalada Muqdisho, si uu qiimeyn ugu sameeyo xaaladda abaaraha Soomaaliya iyo sida ay u socdaan dadaalada gurmadka. Safarkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee uu Muqdisho ku tago sarkaal ka socda dowladda Britain muddo 18 sano ah.
Sidoo kale Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa todobaadkan booqday Magaalada Muqdsiho iyo dhibaatooyinka colaadaha iyo aafooyinka dagaalada hagaasiyeen. Iyadoo ay weli socdaan gurmadka loo fidiyay dadka tabaalaysan ee abaaraha, macaluusha iyo colaaduhu haleeleen, kuwaas oo gurmadka gargaarka loo fidiyay qaybo baddan oo ka mid la leexsaday ka hor intii aan la gaadhsiin dadkii loogu talo galay.
Shir kale oo Hay’adda cuntada aduunku u qaabilsan qaramada midoobay ayaa shir ay ku qabatay dalka talyaaniga ku dalbatay milyaaraad dollar si loo caawiyo masiibada dadka Soomaalida ku habsatay, iyadoo shirkaa ka qaybgalay wasiirka Beeraha Cabdale Xaaji Xasan oo warbaahinta caalamku ku tilmaameen inay shucuurtiisa ka muuqatay dhoola cadayn yax yax leh oo mid waliba doonayay inuu si gaara u tilmaamo wasiirkaa.
Al-seyid Saalax Yuusuf oo hogaaminayay wefdiga Masar ee ka qayb galay shirka Talyaaniga ayaa ku dooday inay tahay meel Jaamacada carabta istiraatiiji ahaan iyo dhaqaalle ahaanba, mujtaca carabta iyo islaamkaba indhaha ayay ku hayaan inkasta oo sida uu sheegay ay masiibooyin haystaan dalalka carabta qaarkood. Iyadoo wasiirka Holond ee Beeraha oo la fadhiyay dhigiisa Somalia ayaa sheegay inay damiir xumo tahay waxa ka dhacay Somalia.
Dhinaca kale warar shebekada Araweelonews heshay ayaa tibaaxaya in masuuliyiin ka socota wadamada carabta gaar ahaan kuwa Khaliijku booqdaan magaalada Muqdsiho si ay indhohooda ugu soo arkaan xaalada bini aadaminimo ee ka taagan halkaa.